Mpivarotra amoron-dalana Efa hanamboatra toerana ho azy ireny ny kaominina
Mariky ny fahantran’ny firenena iray ny hamaroan’ireo mpivarotra ao aminy.
Anisan’izany isika eto Madagasikara izay saika lasa mpivarotra avokoa ny ankamaroan’ny mponina. Ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra manokana dia mila tsy ho azo diavin-tongotra intsony ny eny Analakely ka ny fiara sy ny mpandeha an-tongotra indray no lasa mihafihafy. Raha araka ny fanazavan’ny lefitra voalohan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny kolonely Ramboasalama Emilien dia efa am-pitadiavana ny vahaolana mifandraika amin’izany izy ireo ankehitriny. Lohalaharana amin’ireny ny fanamboarana ilay tsena lehibe sy vaovao etsy amin’ny Petite Vitesse Isotry. Efa mandeha ny tolo-bidy ho an’izay orinasa vonona ny handray an-tanana ankehitriny ka amin’ny volana desambra ho avy izao no kendrena ho vita ny asa. Nambarany fa mitohy ny fanaraha-maso ireo mpivarotra manao hadalana. Ireo tena mampikatso ny fifamoivoizana no voakasika. Ao koa ireo tsy manome lalana ny mpandeha an-tongotra.